Shina vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina aluminium sy mpamatsy | Jixiang
Ny lozisialy aluminium veneer dia mampiasa lovia firaka aliminioma miaraka amin'ny tanjaka avo tahaka ny akora fototra. Ny hateviny dia eo anelanelan'ny 2 mm sy 4 mm. Ny habe sy ny famaritana ny famonoana alim-bary vita amin'ny aliminioma dia elastika, ary misy karazany maro hisafidianana. Ny veneer aluminium manara-penitra avo lenta dia hanampy amin'ny fanamafisana ny taolan-damosina ao aoriana rehefa manamboatra, mba hahafahan'ny veneer aluminium manaparitaka ny fihenjanana manodidina rehefa mitondra ny enta-mavesatra mitsivalana, manamafy ny fahaiza-miteraka sy ny fahamarinan-toeran'ny veneer aluminium, ary manamafy ny tanjaka sy ny hatevin'ny veneer aluminium. Ity dia manome safidy materialy tsara ho an'ny mpamorona amin'ny fampiharana ireo fitaovana vita amin'ny aliminioma.
1. Izy io dia azo ampanjifaina amin'ny fangatahana hamaly ny filan'ny mpanjifa manokana. Ny haben'ny fenitra ambony indrindra dia 1500mm * 4000mm
2. Isan-karazany: Volavolan-doko, pass, tahan'ny totohondry sns.
3. Ny loko Fluorocarbon dia mahazaka harafesina, mahatohitra UV ary miloko marevaka.
5. Fametrahana sy fananganana mora, ahena ny vidin'ny fametrahana sy fikojakojana.
6. Ny fitaovana firaka aliminioma dia azo averina simba tanteraka ary ampiasaina indray, izay fiarovana maitso sy tontolo iainana.
7. Fiantohana kalitao, maharitra.
Ny veneer aluminium vita amin'ny perforated dia afaka manome ny ilain'ny asa isan-karazany, ary be mpampiasa amin'ny rindrina ivelany, valindrihana, rindrina anatiny sns.
Previous: Panel vita amin'ny gazy vita amin'ny aliminioma
Manaraka: 4D veneer alim-bary vita amin'ny kitapom-bary